Izindatshana ezimbili kokukodwa, ezikhuluma nge-systemd | Kusuka kuLinux
Izindaba ku phoronix phawula ukuthi kuyaqhubeka impikiswano yediski cishe okufanele ukwenze ngohlelo lwakho lokuqalisa. Sekuyisikhathi eside kube namazwi abiza ukuvuselelwa nokususwa kwe-sysvinit yakudala. Futhi phakathi kwalawo mazwi umbango phakathi kwalabo abeseka i-systemd, labo abasekela phezulu kanye (kakhulu, bambalwa kakhulu) labo abeseka i-openrc ……… .. futhi abazimisele ukusekela ngaphezu kweyodwa.
Ingxoxo iyashubisa futhi kufana nokuhlanganisa incwadi enamavolumu amaningi (badabula i- Imiyalezo ye-2500, kwavulwa le bug izinyanga ezimbili kuphela ezedlule!!!). i-systemd isekelwa ama-distros amaningi afuduke ngempumelelo (i-Fedora, i-Arch, i-OpenSuse, njll.), kepha abalandeli bayo bayazisola ngokuthi i-Debian kufanele igcine izinhlobo ze-FreeBSD kernel, lapho i-systemd ingafakwanga (futhi noLennart akahlose ukuyifaka). Okufakwa ku-FreeBSD yi-OpenRC (empeleni itheku eliya eDebian KFreeBSD litholakele), kepha yi-Gentoo kuphela kanye nezakhi zayo ezisetshenziswayo (ngaphandle kweSabayon esebenzisa i-systemd). Futhi i-Upstart, inenzuzo yokuqhamuka ezansi nomfula (Ubuntu nezithako zayo kanye ne-Chrome OS), kepha iyashoda uma iqhathaniswa ne-systemd. Futhi uma kulokhu sifaka ingxoxo ngaphandle kohlu lwe-Debian, phakathi kwayo okukhona Umbono kaLennart y UPatrick Lauer ukuphendula (kuLennart), noma iyiphi i-flamewar incane uma iqhathaniswa.
Futhi bekuyizindaba e-phoronix ukuthi sekuvele kunemibono ngaphakathi kwekomidi lobuchwepheshe lakwaDebian. Ngakolunye uhlangothi kukhona U-Ian Jackson (Umlondolozi weDebian daemon) ngubani othanda i-Upstart. Ubheka ubuncane bayo, ngokuhlanganiswa kangcono nekhodi ledemoni, ukuze kube lula ukupakisha, ube nomphakathi ongaqhoshi kancane (ngokusho kwakhe) nangokulungela ukukhethelwa uJessie (i-OpenRC ayikabi khona). Iphinde ikhombise ukuthi ukungalungi okufana nokushoda kwe-IPv6 ne-UDP socket activation noma ukusebenza kwamasokhethi amaningi akudingi izinqumo ezinzima zesakhiwo ngakho-ke kungaxazululwa kalula.
Futhi ngakolunye uhlangothi URuss allbery ngubani othanda uhlelo: Okokuqala ucabanga ukuthi i-OpenRC iyindlela ehlonishwa kakhulu nokuthi awufuni ngisho nokuzihlupha ngokuxazulula izimbungulu njengokuntuleka kokuhlanganiswa nemicimbi esezingeni le-kernel noma ukuncika kwayo kakhulu kwizikripthi ze-Shell kune-syntax yokumemezela. Ngokuphathwa kwensizakalo, ukwenziwa kwamasokhethi (hhayi kuphela ukuwaqalisa kepha ukwenze ngokufana), ukuhlanganiswa kwesimo sedayemon (okuphelele kakhulu kunakuqala) nokuphepha okujulile kuyabonakala. Futhi khumbula lokho I-Debian isivele isebenzisa i-systemd (ikakhulukazi i-logind) yezinhlelo ezithile ezifana ne-udev ne-gnome (inguqulo yayo engu-3.8 isivele ihlolwa) futhi usuvele unalo uhlelo lokufuduka.
Ngokuqondene nombuzo wokuphatheka, abalandeli be-systemd ku-LWN.net bathi «Ayikho isoftware ephathekayo, kukhona kuphela isoftware efakiwe.Ngiqonde ukuthi, noma ngabe abaphathi be-Debian be-kFreeBSD ne-Hurd bayayenza isebenze, noma bazongena shit. Futhi le nketho yesibili inesisindo esikhulu kusukela (ngokusho kwepopcon) kuphela i-0,09% yabasebenzisi be-Debian abane-kernel ye-FreeBSD efakiwe.
Khonamanjalo, unjiniyela we-KWin uMartin Gräßlin ulandela ingxoxo ngoDebian ebengibatshele yona, futhi uyakuthanda ukuqhathanisa kukaRuss Allbery phakathi kwesistimu nokuqala kanye nokuphawula ku-akhawunti yakhe ye-google + ahlose ukuyenza hlanganisa okuhleliwe ku-Plasma, futhi ngenhlanhla ukuthi noma iyiphi imvelo esebenzisa iWayland idluliselwe kusistimu. Ufuna ikakhulukazi ukusebenzisa i-socket activation ukuqala iseshini yakho ye-KWin.
UChristian Loosli ubuza ukuthi i-KDE ayinakho ukuncika okuphezulu. UMartin uphendula ngokuthi i-KDE inokuncika okuphezulu ikakhulukazi ku-QT, kepha kuyifuck, bayifuna kuphela kuzici ezingekho ku-OpenRC noma e-Upstart, kepha okubaluleke kakhulu ngoba bafuna i-KDE incike ku-kdbus (owakho umhloli wamasevisi we-d-bus iphrojekthi efuna ukuhlanganisa i-d-bus ku-kernel) esivele incike ku-systemd. Iphinde ithi ungakhathazeki ngohlelo lokuqalisa ngoba lokhu kuzozimela ekutheni usebenzisa i-OpenRC noma iSysVInit (Eqinisweni, iGentoo isebenzisa i-systemd yize i-init yayo iyi-OpenRC. Ngakho-ke "akumele kube nankinga nge-Debian"). Bese kuba ngu-Eric Hameleers (oyilungu leSlackware coreteam) okhala ngokuthi bafuna ukukhetha ubuchwepheshe obenzelwe iLinux kuphela (futhi inkinga yokuphatheka). UMartin ucela ukuthi ufunde okuthunyelwe izinganekwane ezingamanga uLennart akubhalile. Ukuthi uyamethemba uMartin.
Ucabangani nge-panorama? Izindaba ezilandelayo okumele ngizenze yindatshana ekhuluma nge-systemd, ngizoyenza njengendaba yomdlalo webhola.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Izindatshana ezimbili kokukodwa, eziphathelene ne-systemd
Ngaphandle kokubala ukuthi abathathu kulabo abavotela ukuvuna upstart, ababili abasebenzi be-canonical kanye noyedwa owayekade esebenza.
Phakathi kwe-Upstar / Systemd neMir / Waylad kubonakala kunomncintiswano ophikisanayo phakathi kwesoftware eyenziwe yiCanonical naleyo ekhuthazwa yiRed Hat (phakathi kwabanye)
Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi kuxoxwe ngokusetshenziswa kwe-systemd noma upstart noma i-OpenRC eDebian. Kuyacaca ukuthi i-sysvinit ifinyelela ekugcineni komjikelezo omkhulu futhi ngamafuphi ngicabanga ukuthi ngeke kube nankinga ukuqhubeka nokusebenzisa i-sysvinit ku-KFreeBSD ne-Hurd ngenkathi enye yalezi ezinye izindlela isetshenziswa ku-Linux.
Ekupheleni kosuku uHurd kufanele aqale ukuphatha ukuxhasa ama-sata disks, i-usb, ezinye izingxenye ezingezona i-ext2, ukwesekwa komsindo, izakhiwo ezingama-64-bit, phakathi kwezinye izinto. ngakho-ke ukusekela i-systemd noma i-upstart kungaphansi kohlu olude lwezinto ezibalulekile. Ngicabanga ukuthi i-KFreeBSD izoba nenkinga encane yokuyixhasa.
esihlokweni se-systemd noma i-upstart kubonakala sengathi i-systemd inenzuzo ethile
technique nokuthi upstart inenhlanhla yokubukeka iboshelwe kubuntu hhayi komunye umuntu.
Kuhle kakhulu i-athikili diazepan ngesimo samanje sokuhlelwa ku-Debian nokuthola okuncane, ngoba kunama-distros amaningi asebenzisa lesi siqalo (iSiduction, okuyi-DEBIAN, isivele siyayisebenzisa). Njenge-debianite umuntu ambona evela ngaphandle, ngezikhathi ezithile ehleba ezinkundleni ze-onesibindi se-ARCH.
Ukuqaliswa kanye nomqondo ubonakala uyinkimbinkimbi kimi: Ngabe kunguhlaka? Phakathi kwezinto eziningi, kuvumela ukulayisha okusheshayo kohlelo lapho kwenziwa izinqubo ngokufana?
Ukuba ngumama wama-distros amaningana nokuhlanganiswa ne-STABBITY kufanele bathathe sonke isikhathi emhlabeni ukuxoxa ngayo (noma okungenani ngaphambi kokuthi uJessie aqine)
I-PS: Uma igama lakho kungeyona i-IAN, ngeke usebenze kuphrojekthi ye-DEBIAN? xd
Ukuba yi-debian (kanye ne-derivatives) ukusatshalaliswa okusetshenziswa kakhulu, ukuthwala nokuzimela kubalulekile, kepha ngimane ngiwumfundi olula we-GNU-programming ngakho-ke angikwazi ukuba yingxenye yalezi zingxoxo zobuchwepheshe okwamanje.
I-ep elandelayo kulindeleke, ukufunda lokhu bekujabulisa
Bengifuna ukuphawula ngezinto ezimbili. Okokuqala ukuthi uma i-systemd ikhishwa ngaphansi kwemigomo ye-LGPL, i-Poettering oda yokungayifaki kuzinhlelo ezingezona ze-Linux ayinalutho. Noma ngubani angakwenza ngoba ilayisense liyakuvumela.
Ngokuphathelene ne-KDBUS, akuyona iphrojekthi ye-KDE kepha kunalokho ukuqaliswa kwe-DBUS ku-kernel ye-Linux.
Ngikholwa ukuthi, ukuba ngumsebenzisi we-Ubuntu kusuka ku-6.06 kuye ku-10.10 futhi namhlanje ngibe ngumsebenzisi we-Arch kusukela ngasekupheleni kukaDisemba 2010, i-systemd ingaphezulu kwe-Upstart. Ushintsho olusuka ku-sysvinit lulula futhi ukufunda ukuphatha i-systemd kulula kakhulu.
Okufanele ukwenze yeka ukwenza i-webón! Ngisakhumbula imfucumfucu enkulu ye-pulseaudio nokuhlupheka okwasilethela ama-linuxer eminyakeni yokuqala, nokuthi ekugcineni yanikezelwa ekuthumeleni i-systemd kwamanye ama-unixes.
Inkinga ngokufaka okuhleliwe kwamanye amasistimu ukuthi ingqalasizinda ayikho kulawo ma-kernes ngoba noma azikho izinto ezidingekayo noma izinto ezifanayo ezingazibuyisela endaweni yokusebenza. Ukudala i-systemd ku-kfreebsd kungadinga ukufakwa kwezinye izinto futhi, ikakhulukazi amaqoqo. Ngamanye amagama, ngokusho kukaLenart, kufana nokuzama ukubeka indiza ezweni lapho kungekho zikhumulo zezindiza. ngombono wami kufanele basebenzise i-openCR yezinye izinhlamvu bese beshiya isistimu ku-linux, akunakuba ukuthi abasebenzisi abangu-99.1% bagwetshwe ukusebenzisa isixazululo esingaphansi esingu-0.9%. Ukungasho ukuthi i-kfreebsd ne-hurd sezivele zisebenzisa ukucushwa okuhlukile kunenguqulo ye-linux
[…] Ikhenela le-FreeBSD, lapho i-systemd ingathwalwa (futhi ngeke ithunyelwe, ngoku-oda okucacile kukaLennart Poettering) […]
Ngabe unayo imithombo / isixhumanisi salolo oda? Ngoba kubonakala kimi ukuthi iSystemd iyiGNU, futhi inqobo nje uma ihlala ikhululekile akukho muntu o-oda noma yini. Ngicabanga ukuthi akusho ukuthi ubengeke awenze lowo msebenzi ngokwakhe, ukuthi usebenzela i-GNU / Linux kuphela, yingakho lokho okubhale endabeni yezindaba kuzwakala kukubi impela, njengoPoettering wayeyisilo noma yini.
Sengivele ngiyilungisile, kepha yebo. U-Lennart uthi akwenzeki ukuthi i-port systemd iye kwi-BSD nokuthi ngeke bawamukele ama-patches ukuwenza atholakale ku-BSD noma ku-Hurd (kumazwana).
Yebo, inqobo nje uma isobala kumsebenzisi, angikhathali okungikhathazayo ukuthi amalangabi abandakanya wonke umuntu, kubukeka sengathi wonke umuntu ushada nobuchwepheshe futhi akaboni ukuthi ikuphi okungcono
Kubi kakhulu ukuthi impi yalinda ngagcina senginobuchwepheshe lapho ngikhetha.
Ngokubona kwami ​​kufanele uncike kancane ngangokunokwenzeka kokunye ukusetshenziswa. Ngisho lokhu nge-KDE. Kufanele bagcine ukuncika kube ubuncane. Futhi maqondana noDebian, i-Upstart ingaba lula ukuyisebenzisa njengoba Ubuntu isivele inayo futhi nenani lezimbungulu ezingaba khona zizoncishiswa; futhi uma kunesidingo, i-systemd ingahlala isetshenziswa njengoba kukhonjisiwe ku-athikili.
okwenzekayo ukuthi okufunwayo akusikho "ukuncika" kanjalo. okufunayo ukusebenzisa ezinye zezici ngomusa noma ngeshwa. ukuhlinzekwa kuphela kwe-systemd nokuqala kwezizathu zokwakha kunzima ukusebenzisa okufanayo ngendlela efanayo (ngokwesibonelo, isivele inezisekelo zokuvula, kepha ikhawulelwe kakhulu futhi ayikuvumeli ukwenziwa okufanayo kwezinqubo okufanele kube yisizathu sokuba amasokhethi) ngakho-ke akusikho ukuthi kuya ngokuthi, ufuna ukuthi wenze ucezu oluhle kakhulu lwe-softare futhi kuze kube namuhla noma kunezinye izindlela noma amaphrojekthi ahlinzeka ngokufanayo. isibonelo i-gnome. i-gnome ayincikile ngokusemthethweni ku-logind. i-gnome ithembele kuzindawo ezithile ze-dbus ezinikezwa kuphela yi-logind noma i-console kit okwamanje. induduzo yehlisiwe futhi ishiywe futhi i-loggind incike ku-systemd. kepha akekho ovimbela umuntu wesithathu ukuthi athuthukise i-daemon noma indlela yokuhlinzeka ngezindawo ezifanayo ze-kdbus zokusebenzisa i-gnome, nakhu ukuthi ku-openBSD bane-nome 3.10 yize kungekho bsd ene-dbus noma i-systemd.
Ngokwami, ngemuva kokuhamba ukusuka ku-Arch kuya ku-systemd, ngabona intuthuko enkulu maqondana nejubane lokuqalisa
Ngicabanga ukuthi lezi zingxoxo ezenzelwe onjiniyela. Iqiniso ukuthi angazi ukuthi yini umehluko okhona phakathi kokunye nokunye, futhi ngicabanga ukuthi kubasebenzisi abajwayelekile akubalulekile kakhulu. Ngithole ukuhlelwa kwe-Manjaro futhi angikutholi ukuthuthuka kokusebenza ngaphezu kwe-Debian noma ukusebenza okubi kakhulu. Ngakho angazi…
Noma kunjalo, asithembe ukuthi okuhamba phambili kwenziwe, angazi ukuthi iyiphi inketho. I-LOL
Ngivuna i-systemd ngoba ukugcinwa kwe-kfreebsd okungasetshenziswanga abasebenzisi be-Debian kubonakala kungenangqondo kimi.
Futhi ngenxa yokuthi kulula kangakanani ukusebenzisa i-systemd nokuthuthuka okujwayelekile okukuletayo: D.
Ngaleyo ndlela yokucabanga, ayikho inkampani okufanele isekele iLinux xD
Angisebenzisi iDebian kepha ngiyethemba ukuthi bazokhetha i-systemd, ngaphezu kwanoma yini enye ukuze kube lula ukuyisebenzisa "ngaphandle kokwazi okuthile ngakho" ^^
Yini eholele uBuntu ukuthi akhethe i-Upstart futhi angathathi isinyathelo nge-systemd, ngokubona kwabaningi okubhekwa njengcono? Ozithobayo.
I-Upstart ubuchwepheshe be-canonical (bayathanda ukusebenzisa isoftware yabo) futhi badlula ngaphambi kokuhlelwa ngeminyaka emi-4 engicabanga ukuthi.
Kuhlelelwe ukufa xD
IDebian inezinto ezimbili ezibalulekile ezibalulekile: ukuzinza nobubanzi bomhlaba wonke, empeleni, kulapho ukusekelwa kwayo kwezakhiwo ezahlukahlukene kakhulu kanye namaphrojekthi we-hurd ne-freebsd evela khona. Umbono wami ukuthi kufanele bahlehlise isinqumo ekukhishweni okuzinzile okulandelayo futhi bazinikele ku-OpenRC, okuzogwema lezi zingxoxo.
Kusuka kufayela lami ngithi, i-systemd ibonakala iyindlela enamandla kunazo zonke, noma kunjalo, ngezinsiza okufanele babe nazo, ngoba abakucabangi ukuyakha
"Ukuba ngumlandeli we-OpenRc akuchazwa, uyazisola"
Ngivotela umlando olandelayo!
Angiyena umsebenzisi owazi amagama asetshenzisiwe, kepha nakubantu esazi okuncane kuyathakazelisa futhi kubalulekile ukubona ukuthi ingxoxo enjengale iqala kanjani.
Yini ezohola phambili, intando yeningi, izintshisekelo zenkampani ethile, noma iqiniso lokukhetha eyodwa okwamanje elungiselelwe kangcono izinhloso zikaDebian?
Kulokho engikwazile ukukufunda, futhi njengohlelo, ngingasho ukuthi i-systemd ithuthuke kakhulu kune-upstart.
Iphatha ukuqaliswa kwezinsizakalo kuphela lapho zidingeka (kunciphisa isikhathi sokulayisha sohlelo), futhi izama ukufaka imibhalo esikhundleni sezincazelo (ukuvalelisa ukwehla kwe- .sh) futhi kunenzuzo yamaqoqo, lapho umlawuli Uhlelo luphethe ngokugcwele konke okukhishwayo.
Uma kunokuthile engikuzondayo ngempela ukuxuba ipolitiki nobuchwepheshe ..., uma kunezizathu zobuchwepheshe zokusebenzisa okuthile, akufanele kuvunyelwe nganoma iyiphi indlela ukuthi izingxoxo-mpikiswano zilawulwa yizindaba zezintshisekelo zezentengiselwano noma ubugovu obulula, izizathu kuphela okufanele Ukunqoba amasu, futhi kuleso systemd kuhamba phambili ngaphambi kokuqala ngokubuka kwami.
Angiqondi okuningi kwalezi zihloko ezithuthukile, kepha ingxoxo inothando futhi ilandiswa kahle. Sifuna okuningi!
Uma ungibuza: Systemd. I-Arch ingikhombisile ukuthi kufanelekile ukuyisebenzisa nokuthi ishesha kakhulu kunozakwabo.
Kulinganiselwe ukukhawulezisa (ngoba anginalo ulwazi oluningi lobuchwepheshe)
Ubuntu kufanele busebenzise i-Upstart kwesokudla? Ukuqala kuka-Ubuntu bekuhlala kuhamba kancane kakhulu, kungikhumbuza ngamawindi kwesinye isikhathi, ne-disk phakathi nekhompyutha enesigamu ubudala, bobabili bathathe isikhathi eside ngokwanele ukuze ngihambe bangithele isoda ngibuye ... esikhundleni salokho ngisebenzisa i-Archlinux ngeSystemd the Computer ivuleka ngokushesha ukwedlula noma ngubani engake ngambona empilweni yami yonke i-xD (angenzi ihaba), njalo lapho othile efuna ukuyisebenzisa abalindele ukuthi iqale ngokushesha okukhulu hahahaha
I-kdebus ayiveli ku-kde, kungumsebenzi wesisekelo se-freedesktop inhloso yayo ukuhlanganisa i-d-bus ku-kernel ukuxazulula amaphutha athile i-linux esezingeni lokuphathwa kwenqubo. Kepha okufunayo ukwenza izingcezu eziningana zesoftware eyenzelwe ukusebenza ndawonye ukwenza ngcono ezokuphepha kanye ne-sandboxing.